Wal-Mart Social ịkparịta ụka n'ingntanet weebụsaịtị ada ada. $ 50 ka egwuregwu kacha mma! | Martech Zone
Wednesday, October 4, 2006 Sọnde, Septemba 30, 2012 Douglas Karr
Amaghịdị m na ha na-agbalị! Wal-Mart okpu na-ewu saịtị ịkparịta ụka n'Socialntanet maka Kool Kidz.
Ọ ga-amasị m ime nke a ka ọ bụrụ ọkwa ghe oghe maka na enwere ọtụtụ njakịrị ebe a. Kedu maka nke a? Egwuregwu kacha mma na ihe kpatara mkpokọta ịkparịta ụka n'Walntanet nke Wal-Mart ji dara (na ikekwe n'ofe ịntanetị n'ozuzu ya) na-enweta $ 50 tinye na akaụntụ Paypal ha. Anyị ga-akwụsị na njakịrị 101, enyere onye ọ bụla ohere itinye otu egwuregwu. Agaghị m etinye njakịrị ọ bụla na-akpasu iwe (belụsọ na ha na-akpasu Wal-Mart iwe).
1. N'ihi na ha enweghị ike ịmanye ndị mmepe ọ bụla $ 6.00 / hr ka ha rụọ ọrụ na ya.
Ọkt 4, 2006 na 4:06 PM
Ọ bụ ihe siri ike ịre ahịa ka kool kidz mgbe ha niile nọ n'ụlọ ahịa.
Ọkt 4, 2006 na 4:54 PM
Ekele maka otu ndebiri, Wal-Mart's email pitch rịọrọ ndị na-ede blọgụ A-ndepụta niile maka "HELL nkwado" kama "HELP nkwado"!
Ọkt 4, 2006 na 6:16 PM
Ọkt 4, 2006 na 8:50 PM
Walmart Greeter dị afọ 82 / Webmaster nọ na-arahụ ụra.
Ọkt 4, 2006 na 9:21 PM
N'ihi na Wal-Mart buru oke ibu ka ọ ghara ịbanye na usoro nke tubes.
Ọkt 4, 2006 na 11:07 PM
“Ọ dị ka Goodwill zụtara ndị ọkaibe web ọkachamara niile na mpaghara ahụ: na - akpata ọrụ ịkparịta ụka mmekọrịta nke onwe ya ka ọ kwụsị kpamkpam. The ozi ọma, dị ka mgbe niile, bụ na anyị nke 'Day of the Week uwe ime' ka nọgidere anyị n'elu n'ire ngwaahịa ọzọ consecutive 10 afọ… ”- Walton
Ọkt 5, 2006 na 12:10 PM
Oops, m nzaghachi nwetara truncated. (Mmanụ aeyụ, ha wedara blọọgụ m).
3. N'ihi na ụlọ ọrụ na-akpata ego ya site na ibibi obodo, enweghị ike ịtụ anya inweta ego site na iwulite obodo.